Unai Emery oo isha ku haya xidig ka tirsan kooxda Barcelona si uu kaga dhigto badalka Aaron Ramsey – Gool FM
Unai Emery oo isha ku haya xidig ka tirsan kooxda Barcelona si uu kaga dhigto badalka Aaron Ramsey
Dajiye November 20, 2018
(Arsenal) 20 Nof 2018. Wargeyska “Sport” gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in xaalada uu Denis Suárez kaga sugan yahay kooxda Barcelona ay ka caawineyso kooxo fara badan ee qaarada yurub inay u dhaqaaqaan saxiixiisa suuqa kala iibsiga furmi doono bisha janaayo ee soo aadan.
Denis Suárez ayay wararku sheegayaan inuu doonayo ka tagista kooxda Barcelona suuqa kala iibsiga furmi doono bisha janaayo ee soo aadan, si uu u helo fursad ka badan tan Blaugrana isla markaana uu kaga soo muuqan karo garoomada, kadib markii uu daris la noqday kurisga keydka.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa sheegay in Arsenal ay go’aansatay inay lasoo saxiixato Denis Suárez bilowga sanadka cusub, kadib markii uu saxiixiisa codsaday macalinka reer Spain ee Unai Emery, maadaama uu doonayo inuu xoojiyo khadkiisa dhexe.
Wararka ayaa waxay intaas kusii daray in Denis Suárez uu isha ku hayo inuu wada hadal la galo Arsenal, si uu ugu dhaqaaqo Emirates Stadium, kadib markii uu ku daalay fariisiga kursiga keydka kooxda Barcelona.
Sidoo kale warbaahinta gudaha dalka England ayaa waxay cadeeyeen in Denis Suárez uu noqon doono badalka Aaron Ramsey, kaasoo la filayo inuu isaga dhaqaaqo kooxda reer London midkood labada suuq ee soo aadan, kadib marka uu soo idlaado heshiiska uu ku joogo Gunners.
Marcelo oo hal arin muhiim ah kaga mahad celiyay Ramos mudada 12-ka sano uu ku sugnaa Real Madrid
“Ha iga sugina inaan is dhiibo” - Olivier Giroud